आफ्नो अमेरिकन पासपोर्टको बारेमा रबि लामिछानेले भर्खरै लाइव भिडियो मार्फत मुख खोले !! के यस्तो कुरा भन्नु पर्ने नै थियो त ? कसको लागि ? भिडियो यसरी बोल्छ !!!! - Enepalese.com
आफ्नो अमेरिकन पासपोर्टको बारेमा रबि लामिछानेले भर्खरै लाइव भिडियो मार्फत मुख खोले !! के यस्तो कुरा भन्नु पर्ने नै थियो त ? कसको लागि ? भिडियो यसरी बोल्छ !!!!
इनेप्लिज २०७४ मंसिर २१ गते २२:३३ मा प्रकाशित
पत्रकार रबि लामिछाने भाइले भ्रष्टाचारि कमिसन खोर दलालहरुको गोजिमा निस्सासिएको कानुनलाई बाहिर पीडित माझ पुर्याउने साहस गर्न खोज्दा दिल निशानी मगर जस्ता पत्रकारहरुले गर्दा आज यो देशमा न्याय रुपि सुगा नेता हु भन्नेहरूको खल्तिको रुमाल भएको छ जसको पर्दाफास गर्दा आज अनावश्यक विवादमा रबि लाई घिस्याउनु कति लाजमर्दो कुरा भएको छ नेपालीहरुको लागि । हेरौ आजको लाइव भिडियो मार्फत रबि लामिछानेले जी अमेरिकन आफु संग रहेको पासपोर्ट को बारेमामा खुलस्त गर्नु भएको छ.. भिडियोमा !!